Fiber Hemp Ma Weed • Dawooyinka Inc.eu
By mr. Kaj Hollemans, KH Talo Sharci.
2 Soo dhawee
3 Wax ka bedelida Sharciga Opium
Dhirta xashiishadda waxaa ku jira ku dhawaad ​​xNUMX kuwa kale duwan cannabinoids. Kuwa ugu caansan ee loo yaqaan cannabinoids waa THC (tetrahydrocannabinol) iyo CBD (cannabidiol).
THC waxaa loo yaqaanaa waxyeellada nafsaaniga ah, iyada oo dadku ay la kulmaan dareenka euphoric (sare). CBD ma lahan wax saameyn nafsi ah. CBD waxay bixisaa faa'iidooyinka xasiloonida ee cannabis la'aanta ah. Wakiilku wuxuu leeyahay codsiyo wanaagsan oo ku saabsan dawada. Cilmi baaris waxay muujinaysaa in CBD ay lahaan karto anti-bararka, dareen-ilaalinta iyo saameynta murqaha. Daraasado badan ayaa muujiyay in CBD ay ka caawineyso suuxdinta suuxdinta. Waxay sidoo kale joojinaysaa walwalka iyo caawinta lallabbada.
Si ka duwan THC, CBD ma aha mid ka mid ah liisaska ku jira Sharciga Opium, laakiin warshad cagaaran, kaas oo CBD la soo saaro, waxay hoos imanaysaa Sharciga Opium.
Sharciga Opium wuxuu mamnuucayaa dhammaan beeraha kareemka, haddii aanad ka helin baadhitaan cilmi baaris ah saameynta caafimaad ee kufsiga ama wax soo saarka daawooyinka.
Intaa waxaa dheer, qodobka 12 ee Xeerka Opium wuxuu ka kooban yahay ka-reebitaan ku-beeridda hemp-ka, iyada oo shardi looga dhigayo in beeritaanka "si cad loogu talagalay soo saaridda faybar ama faafinta abuur loogu talagalay soosaarka faybar hemp, iyadoo la fahamsan yahay in laga reebo mamnuuca waxay khuseysaa oo keliya beerista hemp inta beeraha laga beero dhulka bannaan iyo hawada. "
Beerista hemp ujeeddo kale oo kale waa ka mamnuuc. Haddii hemp, oo ku koray dhulka bannaan iyo hawada furan, aan "sida muuqata loogu talagalin soo saaridda faybar ama faafinta abuurka soosaarka fayraska hemp" laakiin ujeeddooyin kale (tusaale ahaan soo-saarka CBD) marka laga reebo Qodobka 12aad ee Xeerka Opium.
Maxkamadda Hague ayaa xukuntay Bishii Febraayo 2017 inaysan jirin (hadhaaga) qashinka faleebaha ah haddii aan loo isticmaalin fiilooyinka ama abuurista abuurka beerista cayayaanka furka. Sida laga soo xigtay Maxkamadda Hague, (haraadiga) laydhka fiber lama isticmaali karo saliidda CBD. Joogitaanka haraaga dillaacan waa ciqaab. Maxkamadda Sare ayaa dhowaan ansaxisay go'aamiyey.
Iyadoo lagu saleynayo taariikhda Amarka Xeerka Aasaaska, waa in la tixgeliyaa in laga reebo Xeerka 12 ee Xeerka Xeerka sidoo kale wuxuu khuseeyaa joogitaanka xayiraadda, haddii uu yahay habdhaqameedkani waa mid si weyn loola xiriirin karo habka wax soo saarka fiber iyo sidoo kale shuruudaha kale ee Qodobka 12 Decium Sharciga ayaa la daboolay.
Sida laga soo xigtay Maxkamadda Sare, haysashada faybar hemp waa la mamnuucay haddii aad damacsan tahay inaad sameyso wax aan ka ahayn soosaarka fiber ama abuurka. Sida ugu dhakhsaha badan ee qof uu u doonayo inuu saliida CBD ka sameeyo fiber hemp, joogitaanka fiiq hemp waxaa loo arkaa inay xadgudub ku tahay sharciga Opium.
Wax kasta oo la tixgeliyo, tani waxay si cad u muujinaysaa wax walba. Iyadoo ku saleysan xeerarka yurubta, beerashada cayayaanka fiberka leh boqolkiiba ugu badan ee 0,2% THC ayaa loo ogolyahay. Qareen Maurice Veldman ayaa sidoo kale aad u cambaareeyay go'aanka Maxkamadda Sare ee Maxkamada oo uu ku dooday in uu yahay mid adag casriyeynta Sharciga Opium.
Wax ka bedelida Sharciga Opium
Bishii Jannaayo 2018 waxay ka muuqatay dukumiintiyadii la sameeyey ka dib Codsiga Wobada in Wasaaradda Caafimaadka, Daryeelka iyo Ciyaaraha laga bilaabo bilowga 2017 ay ka fiirsanayso wax ka bedelidda Sharciga Kacaanka ah si loo dhammeeyo xaaladdan fool-xun.
"Xaaladda (hadda) waxay tahay in sheyga CBD (saliida) aan la mamnuucin, laakiin habka loo soo saarayo ayaa ah. Si loo xaliyo khilaafkan, waxaa loo baahan yahay wax ka badal lagu sameeyo sharciga Opium. ” sida uu sheegay qareen siyaasadeed oo ka tirsan Wasaaradda VWS. Intaa ka dib way xasilloonayd. Lama oga goorta ay wasaaradda caafimaadka, daryeelka iyo isboortiga ay wax ka qaban doonto arrintan. Iyadoo xalku muuqdo. Waxyaabaha ka reebban ee ku xusan qodobka 12 ee Xeerka Opium ee amarka ku saabsan abuurista hemp fiber-ka ayaa si fudud loo dheereyn karaa, si wax soo saarka CBD (saliid) sidoo kale loo oggolaado. Ama, xitaa ka sii wanaagsan, si fudud uga saar fiiq hemp leh wax ka yar 0,3% THC Sharciga Opium.
Warbixinnada ka socda Machadka Trimbos ayaa muujinaya inaysan jirin wax CBD ku qoran mid ka mid ah liiska ku yaal Sharciga Aaladda, sababtoo ah CBD ma lahan wax saameyn nafsi ah leh mana jirto dhacdooyin caafimaad oo la soo sheegay.
Shirkado badan oo badan oo ku yaala Maraykanka maanta waxay ku daraan CBD alaabtooda. Haddii ay tahay qaxwada, cocktails, lotion ama dawooyinka eyga, badanaa iyo wax ka badan ayaa ku jira CBD. Waxay yihiin dad aad u caan ah. Hooyooyinka iyo xitaa xayawaanka tijaabin iyada oo leh.
Tan waa la oggol yahay hadda in Diisambar 2018 "Sharciga Beeraha" cusub uu dhaqan galay. Sharcigani wuxuu sharciyeeyay abuurista bucshiraarka (xaaladaha qaarkood), oo ay kujirto beerista dhirta loo isticmaalo soosaarka saliidda CBD.
Gudaha "Bill BillFiber hemp waxaa lagu qeexaa inay tahay dhir xashiishad ah oo ka yar 0,3% THC. Foornada kulaylka ah ee fiber-ka ayaan hadda daboolin Sharciga Maaddooyinka La Xakameynayo (Sharciga Maraykanka ee Opium).
"Biilka Beeraha" wuxuu hubiyaa in Cannabinoid kasta oo laga soo dheegto fiber hemp uu sharci yahay, iyadoo la siinayo fiiq hemp-ka uu ku koray beeraley ruqsad haysta oo waafaqsan shuruudaha sharciga.
Tani waxay ka dhigan tahay in soo saaridda saliidda CBD loo ogol yahay Maraykanka, haddii shuruudaha qaarkood la buuxiyo. Tani way ka duwan tahay xaaladda Nederland, halkaas oo soo saarka saliidda CBD la mamnuucay, sababtoo ah xayiraadda joogtada ah ee xayiraadda fiber-ka oo aan lahayn wax saameyn nafsi ah, mana aha wax halis ah caafimaadka iyo bulshada. Tani waa mar labaad tusaale ahaan nasiib darro ah in Netherlands ay ka rajo beesho horumarka caalamiga ah ee aaggan.
Ma isku deyeysaa inaad joojiso haramaha sigaar cabista? CBD ayaa kaa caawin karta kaa ilaaliya in aad shiddo isugeyn, daraasad ayaa tiri
Malaayiin dad ah ayaa la kulma ku tiirsanaanta balwada marijuana, si aad u badan oo nolol maalmeedkoodu yahay ...
Shirkaddu waxay dhistay aalad sahaminta marijuanaanka oo ay bilaaban doonto sannadka 2020
Neefsashadayaasha ayaa shaqeynayay in ka badan 100 sano xilligan iyo ...
Bert ayaa qoray:
15 September 2019 ee 09: 00
God morgon, min-man manastat prostatacancer-ka, ka soo jaceylka iyo halista dhiiga kaadida leh. Jag hörde om läkande krafter hos RSO-cannabisolja och bestämde mig för att prova det. Min man började ta daawooyinka iyo dawada loo qoro som fästs vid cannabisoljan och på bara tre veckor efter att jag tog daawooyinka, blir min man botad. Dhammaan xallinta Rick Simpson